အခြေခံ ကဗျာ မူလတန်းကျောင်း ဒီဇင်ဘာလ တတ်မြောက်မှု စစ်ဆေးခြင်း
အခြေခံ ကဗျာ မူလတန်းကျောင်း ဒီဇင်ဘာလ တတ်မြောက်မှု စစ်ဆေးခြင်း ( ကဗျာ) ၁။ကဗျာကလေး(၊)ကဗျာမ(။)ထည့်ရ်ျ ပြန်ရေးပါ။ (၂)မှတ် ကဗျာသုံးပါး ကဗျာဆရာသမားကဗျာဘိုးဘွားမိဘစသောရိုသေထိုက်သူတို့ကိုကန်တော့ကြသည် ကဗျာသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုခေါင်းလျှော်ပေးခြင်းရေချိုးပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြသည် ၂။အောက်ပါကဗျာစကားလုံးများဖြင့် ကဗျာဖွဲ့ပါ။ (၆)မှတ် ကဗျာနှစ်သစ်ကူး၊ကဗျာအုပ်ချုပ်၊ကဗျာဝတ်ရည်၊ကဗျာလွှင့်ထူ၊ကဗျာထိန်းသိမ်း၊ကဗျာစည်းသား ၃။ကဗျာဖြည့်ပါ (၃)မှတ် (က)ကဗျာ၏ လွတ်လပ်ရေးကို-------ခုနှစ်------လ------ရက်တွင်ရရှိခဲ့သည် (ခ)ကဗျာရေးရာတွင်ခေါင်းဆောင်ကို----------ဟုခေါ်သည် (ဂ)ကဗျာကစားခြင်းသည်----------စေသည် (ဃ)ကဗျာများမှာ-------------များဖြစ်သည် (င)ကဗျာအုံတစ်အုံတွင်--------တစ်ကောင်သာရှိသည် (စ)ကဗျာအခါတွင်ကဗျာအများသည်ကဗျာများကို-------ကြသည် ၄။ကဗျာများကိုဖြေပါ (၁၂)မှတ် (က)ကဗျာဟူသောစကား၏အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြပါ။ (ခ)ကဗျာတစ်အုံတွင်ရှိသော ကဗျာအမျိုးအစားများကို ဖော်ပြပါ။ (ဂ)ကဗျာ၏အသုံးဝင်ပုံကို ဖော်ပြပါ။ (ဃ)ကဗျာမြေခြား ကဗျာများကို ဖော်ပြပါ။ (င)ကဗျာကစားခြင်းဖြင့် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရသနည်း။ (စ)ကဗျာလွတ်လပ်ရေးနေ့ကို အဘယ်ကြောင့်နှစ်စဉ်ကျင်းပသနည်း။ ၅။“ကဗျာဝတ်” ကိုကဗျာရေးပါ ။ (၂)မှတ်
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 9:06 PM0comments
ကျမ မွေးနေ့လို့ဆို ပြီး သူ….လေ…….. စကော့တလန်တံဆိပ်ကို ၀ယ်လို့ သောက်နေလိုက်တာ …
ဘ၀ဆိုတာ ရယ်စရာတော့ ကောင်းသား အဖေ အင်းသား အမေ ဘီလူးကျွန်းသူ တို့ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ ချစ် ပေါင်း သင်း လို့…. မိသားစုလေးဖြစ်လာ ရှစ်မိုင် မှာ လေးဘီးဝန်းနဲ့ ကပ်လျက် စိန်ပန်းမြိုင်ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူလားမြောက်လို့ အရူးသချိ်င်္ုင်းကုန်းဆိုတာ ကြောက်စရာမလိုတဲ့ ကစားကွင်းပါ ထားတော့ ရန်ကုန်သူစစ်စစ်ပါ လှိုင်ကောလိပ်မှာကျောင်းတက်ခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်သမီးဆိုလား ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ပြောမယ်ဆိုတော့ ဘာကားမှမရှိဘူး ခြေလျင်လျှောက်လိုက်ရတာ ပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်က အာဏာသိမ်းတာနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တာပဲ ရိုးရိုးလေးပါ ကျမလဲ ကျောင်းဆက်တက်လိုက်တာ ကျောင်းဆင်းကာစမှာ အလုပ်ခွင်ထဲတန်းရောက်တော့တာ တိုင်းဆောက် ၁၂ မှာ jeလေ ပါမစ်နစ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးလား မြောက်ဒဂုံ ရုပ်ရှင်ရုံကစ လို့ ဘာမှန်း ဘယ်လိုမှ မှန်းလို့မရတဲ့ ကောင်လေးရောက်လာ ဒီလူဟာ ကိုယ်ချစ်ရမယ့်သူလား ဘာမှန်းကိုမသိခဲ့ပါ ရောက်လာတဲ့ကောင်လေးဟာ သူဌေးကားကိုမောင်းတယ် စာရင်းဇယားတွေလဲသူပဲ ကိုင်သတဲ့ သူက ကျမကို ကြည့်တာ မရိုးသားးဘူးလို့ထင်ရ ဒီတောသားက ငါလို အင်ဂျင်နီယာကို အင်ဂျင်နီယာသူဌေးကလဲ စိတ်ညိုညင်လို့ ဒီဘဲတော်တော်ဆိုးတယ် သူပုံစံက လိုချင်တာ ရအောင်ယူမယ့်သူမျိုး မိန်းမရအောင်သူပိုးတာက မငြင်သာဘူး ကြည့် ကျမ ကိုများ သူ့ကိုချစ်ရင် ….. သိလား…….. သူကယောက်ျားဆိုတဲ့ မာနကြီး တခွဲသားနဲ့ ထားလိုက်တော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အချစ် ဆိုတာကြီးနဲ့ သားလေးတစ်ယောက်တောင်မှရ ရော ဟော လာပြန်ပြီ ကဗျာစာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့မှ သူ့ ရဲ့ ဘ၀ ကိုသိရ ပထမ တစ်အုပ် ကုန်ရတော့တာပါပဲ ကျမရဲ့ မူးစု ပဲစု ပိုက်ဆံတွေ လာပြန်ပြီ နောက်တစ်အုပ် သူထုတ်ချင်တာတွေ ထုတ်ပါ ကဗျာကို အရာအားလုံး ထက်သူချစ်တာ ဘာကြောင့်ပါ လိမ့်
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 9:04 PM0comments
ကွမ်းရွက်၊ထုံး၊ကွမ်းသီး နဲ့ထည့်ချင်ရာထပ်ထည့်လိုက်ပါ ကွမ်းယာ
အရေမရ အဖတ်မရပါပဲ- ၀ါးပြီးထွေးထုတ် ပစ်လိုက်ရတာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် စားနေတယ်၊စားနေတယ်။ကွမ်းယာဆိုင်တွေ နေရာအနှံ့…မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့……… ရေကြီးလို့ကွမ်းခြံတွေ ရေမြှုပ်ကုန်လို့၊ကွမ်းတွေပိုးကျလို့၊ကွမ်းသီးဈေးတက်လို့..စသည်ဖြင့်၊ ကွမ်းယာ ဈေးတက်လဲ ကွမ်းယာဆိုင်တွေ ပိုများလာလေပဲ။လောလောဆယ် လုပ်စရာမရှိရင် ကွမ်းယာဘန်းလေး တစ်ခုတည်ပြီး လျှောက်ရောင်းရင်စားဖို့တော့ ရမှာ…စသည်ဖြင့်…. ဘယ်အချိန်ကစလို့ ကွမ်းစားခဲ့ကြသလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်သေသေချာချာ မသိဘူး။ကျွန်တော်မမွေးခင် ကတည်းကစားနေကြတာ သေချာပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်မှာငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေ့ကြေး ကွမ်းအစ်ကြီးနဲ့စတွေ့ခဲ့တာပါ။အဖိုးကလည်း ကွမ်းစားတယ်၊အဖေကလည်းကွမ်းစားတယ်၊ကျွန်တော်လဲ ကွမ်းစားတယ်။အဖိုးနဲ့အဖေတို့တုန်းကတော့ကွမ်း/ကွမ်းသီး/ဗမာဆေးရွက်ကြီး/ထုံး(တချို့ကတော့ရှားစေးပါတယ်)ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျတော့ များလိုက်တဲ့ အိန္ဒိယဆေးမွှေးတွေ…..နိုင်တီးတူး၊စစ်ကနယ်၊ဘုရင်မ၊ ဆာဂါ၊ဟမ်ဒရက်၊နှပ်ဆေး၊ဆေးပေါင်း……….စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ခု…..ကြားနေရပြန်ပြီ…“မင်းတို့ကောင်တွေက ၊တော်တော်ပိန်းတဲ့ကောင်တွေ..ဘာဆေးမွှေးလဲ၊ဘာတံဆိပ်လဲ ဘာအမျိုးအစားကိုလိုချင်လဲ၊ငတုံးတွေ ၊မင်းတို့စားနေတာ အတုတွေကွ၊လာစမ်းပါ၊လိုချင်တဲ့တံဆိပ်ရမယ်၊ငါ တို့ရပ်ကွက်ထဲကထွက်တာ”တဲ့။ ရှုပ်နေတာ၊ရှုပ်နေတာ ကွမ်းယာ ကိစ္စ။ ငယ်ငယ်က၊ စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတာက “တံတားဦးက ကွမ်းနုဝါ ငမြာကဆေး ကိုင်းထုံးဖြူ ပြည်ရှား သာဝါးလို့ ထွေး” တဲ့။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ နန်းတော်တိုင်တွေမှာ ထုံးတွေပေနေတာတွေ့တော့ စည်းကမ်းတစ်ခု သတ်မှတ်တယ်၊ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်၊နန်းတော်တိုင်မှာ ထုံးတွေကပ်သုတ်ရင် “လက်ညှိုးဖြတ်စေ”တဲ့။တစ်နေ့မှာ ဘုရင်ကြီးဟာ ယောင်ပြီး နန်းတော်တိုင်မှာ လက်ကထုံးကို သုတ်မိခဲ့တယ်။မူးကြီးမတ်ရာသေနာ ပတိတွေကတော့ ဘာမှ မပြောရဲကြဘူး။နည်းနည်းလေး လွတ်သွားတဲ့ သတိကို ဘုရင်ကြီးက သိတော်မူခဲ့တယ်။ “ငါ သုတ်လိုက်မိပြီ၊ငါဘာလုပ်ရမလဲ” ဘုရင်ကြီးဟာ ကြာကြာမစဉ်းစားပါဘူး၊လက်သုံးတော် သံလျက်နဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ညှိုးကိုဖြတ်လိုက်တော်မူသတဲ့။ ဒီ ရာဇ၀င်လေးကို ဖတ်မိတော့ “သြော်ဒီလို ဘုရင်လဲ ရှိပါလား”လို့လေးစားချီးကျူးမိတယ်ဗျ။ ဒါ….ကွမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရာဇ၀င်ပါ။ “ ကွန်းမန်း/ထုံးမန်း တွေစွမ်းလိုက်တာ၊ဓါးခုတ်ရင် ဓါးကျိုး၊လှံထိုးရင် လှံခွေ ဒါတွေကို မင်းတို့ကရယ်ကြမှာ သေနတ်ပြီးတယ်၊ကျည်လုံးဝကိုမထွက်တာ၊ထိုးလိုက်/ခုတ်လိုက်လို့သွေးထွက်လာရင် လက်နဲ့သပ်ချလိုက် ထွက်နေတဲ့သွေးတွေ ချက်ချင်းတိတ်သွားတယ်ကွ” တဲ့။ ပေါင်မှာ ထိုးကွင်းတွေ အပြည့်နဲ့ဘကြီးတစ်ယောက်ပြောခဲ့တာ ခုထိ မှတ်မိနေတယ်။(ခု ခေတ်စားနေတဲ့ တက်တူးတွေကို ရယ်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ထိုးကွင်းဗျ၊ ကွမ်းသီးကို ပါးစောင်မှာ ခဲထားရင်း စုတ်ချက်ထိုးလို့နာတာကို ဗမာ့သတ္တိ အပြည့် နဲ့ အထိုးခံတဲ့ ရှေးမြန်မာ ကြီးတွေ) ဗျတ်ဝိကိုသတ်လို့မရလို့ သူ့ချစ်သူ မအိုစာက“ကွမ်းတစ်ယာ၊ရေတစ်မှုတ်နဲ့”အားလျှော့ခိုင်းမှသတ်လို့ရတာ တွေ၊ ကွမ်းစားရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေ၊ “ကွမ်းမစားရ၊ကွမ်းစားနေသူများ မ၀င်ရ”တွေ၊ တစ်ခါတုန်းက နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် လေးဖြူတစ်ယောက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ ဂီတပွဲတော်တစ်ခုကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ဘူးတယ်။ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေကို သီဆိုရတဲ့ပွဲဆိုတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ထူးအိမ်သင်ရဲ့ “ရာဇ၀င်များရဲ့သတို့သမီး”ကိုဆိုခဲ့တယ်တဲ့။သူဟိုမှာနေတဲ့အခိုက် အခက်အခဲတချို့ ပြောပြပါဆိုတော့(အင်တာဗျူးမှာ)“ကွမ်းမစားရတာနေရခက်တယ်” တဲ့၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ဒီလိုပြောတယ်“ဘယ်ကလာလာ သီရီမင်္ဂလာဈေးမှာဂိတ်ဆုံးတာ”တဲ့……… (သော်ဇင်အုန်း)
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 5:44 AM0comments
ဒီနေရာကို အချစ်က ရောက်လာခဲ့တာပေါ့
နာမည်တော့ရေးတတ်တယ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တော့ အလွတ်မရဘူး သဲတစ်တောင်း ကျောက်တစ်တောင်းနိုင်ကတည်းက အလုပ်စလုပ်ခဲ့တာ (ငယ်ငယ်ကတည်းက ငါးရှာ ပလပ်စတစ်ကောက်တာတွေမပါ) ခု……မြေကြီးကို လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ကျကျနနတူးနိုင်တယ် မဆလာဖျော်ဟေ့….ဆိုရင် ပန်းရံဆရာကိုမေးစရာမလိုတော့ဘူး ၁း၃ ၁း၎ ၁း၅ ကျောက်လောင်းမှာဆိုရင် ၁း၃း၆ ၁း၂း၎ အိုဗျာ ပြောစရာကိုမလိုတော့တာ အုတ်စီရမှာ ချောရမှာ ဘယ်နှအိတ်စပ်ဆိုတာကစ ကျွမ်းနေပြီ သူ့ကိုဒီအလုပ်ထဲမှာပဲတွေတာ သူလဲနောက်လိုက် ကိုလဲလူကြမ်း လွမ်းခန်းတွေမရိုက်ချင်ပါဘူး ယူကြပြီးရင်လဲ ဒီအလုပ်ပဲ ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့။ ။ (သော်ဇင်အုန်း) ၃၁.၁၀.၂၀၁၂
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 5:41 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:59 PM0comments
ဖြစ်ချင်တာတွေအသာထားလိုက် တော့ကွာ လာ ချ မယ် ဟေ့ကောင် ကိုယ်သောက်တာ ကိုယ်ရှင်းနော် ငါ လဲ မနက်ဈေးဘိုးနဲ့ လမ်းစရိတ်ချန်ပြီး အကုန်ဆွဲမှာနော် တင်းတယ် ဒီလောက်ပူနေတာ ငရဲပြည်တောင်ဒီလောက်မပူဘူး ရေ ဘူး ကြီး ၅ဘူးသောက်တာတောင် သေးမပေါက်ဘူး အလုပ်လုပ်တာမပင်ပန်းဘူး နေပူထဲ တက်လိုက် ဆင်းလိုက်နဲ့ မျက်လုံးထဲ ၀င်လာတဲ့ ချွေးတွေနဲ့နေရောင်ထိတော့ ငါ ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး ဟူး ပင်ပန်း ဆင်းရဲလိုက်တာ မင်းလူကြမ်းလုပ်သက်က ငါ့ထက်ကြီးတယ် …ပဲ ခုထိ လူကြမ်း ပဲ……. အေးပါ ငါလဲသံလက်ကိုင် ပန်းရံဆရာတဲ့ ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး လူကြမ်း ကတက်လာတဲ့ အောက်ခြေကစတဲ့ ပန်းရံဆရာ လေ ခု ညနေတော့ ချ ချ ချ ကွာ တဆိုင်လုံးသောက်ပစ်မယ်
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:15 AM0comments
ယားယံခြင်းကိစ္စများ လူဆိုတာကလည်း ဘာလို့လူဖြစ်လာရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိကြဘဲ “လူ့ဘ၀”ကိုရောက်ခဲ့ ရရှိခဲ့ကြရတယ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်သက်သက်ကို ပြောရင် လက်ခံချင်လဲလက်ခံကြပေါ့။ လက်မခံချင်ရင်လည်း လက်မခံပိုင်ခွင့် ရှိကြပါတယ်။အို…လူသား…..တို့……ခင်ဗျား။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်သက်သက်ကိုသာ တင်ပြမှာဖြစ်လို့ မှားရင်လဲကျွန်တော် မှန်ရင်လဲကျွန်တော်………ပေါ့။ မှား/မှန်ခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာသာ တာဝန်ရှိပါတယ်လို့……..ဦးစွာပဏာမပြောလိုပါတယ်။ လူဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူရဲ့အတ္တတော့ရှိမှာပေါ့။ အတ္တအရ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအရ၊မကြိုက်တာတွေ ကြိုက်တာတွေ ကိုလွတ်လပ်စွာ ပြောဆို၊ရေးသား နေချင်တာက ယခုခေတ်အခါ ခေတ်စားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောရင်ရမလားဗျာ- မြင်နေရတာ ကြားနေရတာ စက္ခု သောတ….. ကိုယ်နဲ့အကြိုက်မတွေ့တာတွေများလို့ပေါ့။ ကိုယ်ကပဲ ခေတ်နဲ့မလျှော်ညီလို့လား။နောက်မှာကျန်နေခဲ့လို့လား။ဒီ ခေတ်ကြီးကို ကြည်လင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့လို့လား။နားးးးးးးးးကိုင်းကြီးကြီးမှာပြန်နားရမှာလားးးးးးးးးးးး “ဦးလေးရာ အိမ်ကိုသာပြန်သွားစမ်းပါ”တဲ့လား “သင်္ကြန်ဆိုတာ ဦးလေးတို့မသိပါဘူးဗျာ”တဲ့လား “ဒီလိုဝတ်တခေတ်မှီတာရှင့်”တဲ့လား “ကိုရီးယားကားတွေမကြည့်ဖူးဘူးထင်တယ်”တဲ့လား “ဟိုးးးးး၂၀ရာစုကို ပြန်သွားတော့နော်”တဲ့လား သူတို့ပြောတာမမှားပါဘူး၊မှားနေတာက ကျွန်တော်ပါ။ဒီခေတ်ကြီးနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျမနေနိုင်တာကိုက ကျွန်တော့်အပြစ်ပါ မျက်စိကမြင်နေတာ နားကကြားနေတာ စိတ်ထဲကခံစားရတာ….. ဒေါသဖြစ်တော့လည်းကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ကိုယ့်ဘာသာအလိုမကျနေတာ ကိုယ့်ဒေါသကိုယ်ခံပေါ့။ ရပ်ကွက်ထဲ စာပေဟောပြောပွဲကို သွားပြီးနားထောင်ကြည့်တော့ ၊ဒါ စာပေဟောပြောပွဲလားးးးးးးးးးးးးးးး ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမြသန်းတင့်တို့ဟောပြောခဲ့ကြတာ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကြားတာ မှားများသွားလား ဆိုပြီး ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲလေးတွေအကြောင်ြးောမိတော့………………… “ဟားးးးးးဟားးးးးးဟားးးးးး”ဦးလေးပြန်သွားပါဗျာ၊အဲဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပြန်နေလိုက်တော့ ၊ဒီခေတ်မှာဒါတွေမရဘူးဗျ။ကြားလား လက်ခုပ်သံတွေ ၊မြင်ရလားးးးးးးဥာဏ်ပူဇော်ခတွေ…… နားပါဗျာ ဦးလေးရာ တဲ့။ ဒါအနုပညာမဟုတ်ဘူးကွ ၊မျက်နှာဖုံးတင်ရိုက်လည်း ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူး ၊မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မလျှော်ညီဘူးနော်။ဖော်တာဟာ တဏှာဖြစ်နေတယ်။ရိုင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတယ်လို့ထင်တယ် ဟိုကွာ…..PLAY BOYမဂ္ဂဇင်းမှမဟုတ်တာ…လို့ ပြောမိတော့….. “ဦးလေးတို့ ကဗျာတွေကို ဘယ်သူကဖတ်လို့လဲ ၊ဒီလိုမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ဦးလေးတို့ကဗျာတွေကို အဖြည့်ခံထည့်ပေးနေ၇တာ။ဒါ ကွာလ်တီခေတ်ဗျ။ကြော်ငြာခေတ်လေ။မဂ္ဂဇင်းအသက်ရှည်ဖို့…………. ကွာလ်တီလိုတယ်ဗျ” တဲ့ ဒီလိုကွာ….ကျေးလက်က ဆင်းရဲသားတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ အကျိုးကို လိုလားတယ်ဆိုရင် ကျေးလက်နေ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားထဲနေရမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို နားထောင်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆီးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာ ပေါ့။ခုတော့ကွာ …..လို့ ယူဆချက်ကို ဆွေးနွေးမိတော့………… “ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဦးလေးကြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာ အခမ်းအနားအားလုံး ဟော်တယ်ပေါ်မှာကျင်းပနေတာ …..ဗွက်တွေ ၊ရွှံ့တွေ၊နွံတွေ၊ လမုတောတွေ၊စစ်ပြေးတွေ၊ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ကိစ္စကို ဒီလိုဟော်တယ်ကြီးတွေ ပေါ်မှာခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပပြီး ပြောမှ မီဒီဟာက ဖြန့်လို့ ကမ္ဘာကသိကြမှာလေ။ဂလိုဘယ်….လေ……. ဦးလေးရဲ့…” တဲ့။ လူဆိုတော့ လူသားရဲ့တဏှာရှိပြန်တော့ ညနေ ညနေ စီတယ်လေ စီတယ်လေ……..ဘီယာလေးနဲ့…. ဆိုရင်ပေါ့၊ကျွန်တော်တို့လူပျိုအရွယ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့သီချင်းတောင်ရှိသေး၊”ရေခဲ ….စိမ်….ဘီ……. ယာ”တဲ့။နောက်ကြားဖူးတဲ့သီချင်း”ဘီယာဆိုတာအရက်မဟုတ်ပါ”တဲ့။ဘီယာလေးစုတ်လို့၊မြုံ့လို့ လေညှင်းလေးခံလို့…….ညနေခင်းကိုဖြတ်သန်းနေတုန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး “ဦးလေးးးးးးးးးးးဝါသနာပါရင် ရှိတယ်နော်၊သားကိုပြော…..ဟိုမှာတွေ့လားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဘာညာရှင်းတယ်နော်။ဇယားမရှုပ်ဘူး”တဲ့။ ခက်တော့ခက်ပြီ၊ခက်နေတာကကျွန်တော်ပါ၊သူ့ဘာသာသူသွားနေကြတဲ့ အချိန်တွေထဲ ကျွန်တော် ကသာ မလိမ်မိုးမလိမ်မာ ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်မိတာ။ ခက်တော့ခက်ပြီ၊သူ့ဘာသာသူ ပန်းကုံး၊သရဖူ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကြေနပ်လို့ သူပေးကြ၊သူကြေနပ်လို့ လက်ခံကြ တဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မလိမ်မိုးမလိမ်မာ ၀င်ရောက်နျောက်ယှက်မိတာ။ ကျွန်တော့်အမှားပါ ၊ကျွန်တော့်အမှားပါ၊ကွန်တော့်အမှားပါလို့ ညီးတွားနေ၇င်း ကျွန်တော့်လိုမှားတဲ့ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ကို သတိ၇မိပါတယ်။ ကဗျာဆရာကမှိုင်း(ဆေး-၂)ပါ သူက သူ့ရဲ့ မသက်မသာ ကိစ္စတွေကို ကဗျာဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ကဗျာနာမည်က “ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ”တဲ့ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုန်း (သော်ဇင်အုန်း)
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:04 PM0comments
က ကလေးငယ်ချစ်စဖွယ် Friday, September 21, 2012 အစားအစာတွေ ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အ၀တ်အထည်တွေ ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘယ်တော့ အိမ် ပြန် ရမလဲ ဒီမှာမပျော်ပါဘူး သားတို့မှာအိမ်ရှိတယ် (သော်ဇင်အုန်း)
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 7:38 PM0comments
(ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းများ) အတူဆော့ကစားကြ ယောက်ျား-မိန်းမ မရှိ ငါတို့ ထုတ်ဆီးတိုးကြတယ် တူတူ ပုန်းကြတယ် ဂေါ်လီ လှိမ့်ကြတယ် သားရေကွင်း ပစ်တယ် ဘောလုံး ကန်တယ် ရေကူးတယ် သစ်ပင်တက်တယ် တခါတခါ စစ်တိုက်တမ်းလဲ ကစားခဲ့ကြ ဒိုးထိုးတယ် ၊ ဖန်ခုန်တယ် …….. ………….. ……… “ဟေ့ ကလေးတွေ ။တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကလေးတွေ “တဲ့ ငါတို့ကိုမုန်းတဲ့ လုကြီးရဲ့အိမ်ရှေ့ ဇောင်းခါးသီးပင်တွေတန်းစီလို့ ခူးမစားဘဲ ငါတို့ ဒုတ်နဲ့ရိုက်ချ သူ့အိမ်ရှေ့ရေမြောင်းထဲ ဇောင်းခါးသီးစိမ်းစိမ်းလေတွေမျောလို့ အဲဒီလူကြီး စိတ်ဆိုး ငါတို့ ရယ်မောပျော်ရွှင် ခဲ့ကြ။ ငါ့ရဲ့အိမ်ဟာ မင်းတို့အိမ်ပဲ မင်းတို့အိမ်ဟာလဲ ငါ့အိမ်ပဲ ငါ့အိမ်က ထမင်းဝိုင်းဟာ မင်းတို့ထမင်းဝိုင်းဖြစ်သလို မင်းတို့အိမ်က ထမင်းဝိုင်းဟာလဲ ငါ့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းပဲ၊ နေပူပူ မိုးရွာရွာ နှင်းကျကျ နေ့တွေ လရောင်အောက်က ညတွေ လရောင်ကင်းမဲ့ ညတွေ ငါတို့တတွေ ပျော်ကြ ပြေးတမ်း လိုက်တမ်း ကစား မောပန်းခြင်းများ မရှိခဲ့။ ငါတို့ရဲ့ ကစားကွင်းထဲမှာ အသပြာမရှိ ၊ ဂုဏ်ပကာသန မရှိ အာဃာတ ၊အမုန်း ၊မနာလိုခြင်း မရှိ ပျော်ရွှင်ခြင်းများသာရှိခဲ့သော ငါတုိ့ရဲ့ ငယ်ဘ၀ အလွမ်းများစွာဖြင့်…………….. (သော် ဇင် အုန်း)
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:12 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 9:00 AM0comments
ကျား နဲ့ ယုန် ခေတ်မှီတဲ့ကျားတစ်ကောင်ဟာ အမဲကောင်ကိုချောင်းပြီး အလစ်ဖမ်းစားရတာ ကြာတော့ ပျင်းလာတယ်။အချောင်သက်သက်သာသာနဲ့ စားချင်လာတယ်။ဒါနဲ့ ကျားဟာ အကြံထုတ်ထုတ်တယ်။ကျားဆိုတော့ သိပ်ကြာကြာမစဉ်းစားရပါဘူး၊အကြံရတာပေါ့။ဒါနဲ့ ကျားဟာ သူ့အကြံကိုအကောင်အထည်ဖော်တော့တယ်။ပထမဆုံး သမင်တစ်ကောင်ကို ဖမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ မစားဘဲ ဒီလိုပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ “ငါမင်းကိုစတာပါကွာ၊ဒီနေ့ကစပြီး အသားမစားတော့ဘူး၊သက်သတ်လွတ်အသီးအနှံစားပြီးဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့် အဓိဌာန်ဝင်မလို့ကွ” တဲ့ ကျားပါးစပ်ထဲကထွက်လာတဲ့သမင်ဟာ ၀မ်းသာအားရပြေးလာပြီး တစ်တောလုံးကို ဒီအကြောင်းလျှောက်ပြောပြတယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမယုံပါဘူး.။သမင်ကကျိန်တွယ်ပြောတော့ ပညာရှိယုန်ကစဉ်းစားတယ်။ “ခဏနေကြအုန်း ငါကိုယ်တိုင်စမ်းမယ်” ဆိုပြိး ကျားဆီကိုထွက်သွားတယ်။ကျားဆီရောက်တော့…. “သမင်ပြောတာဟုတ်လား၊ကျုပ်မယုံဘူး၊မြက်စားပြမှယုံမယ်” လို့ပြောတယ်။ကျား ပဲ ….ဒါမျိုးစမ်းလို့ဘယ်ရမလဲ။မြက်တွေကိုချက်ချင်းကောက်စားပြတာပေါ့။ဒီတော့ပညာရှိယုန်အတည်ပြုလိုက်ပြီး တစ်တောလုံးယုံသွားကြပြီပေ့ါ။ နေ့တိုင်းကျားရဲ့ဂူမှာ အသီးအနှံလာပို့သူတွေနဲ့ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားနေတာပေါ့။ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာတစ်ခုက တိရိ စ္ဆာန်တွေထဲက အားအရှိဆုံး၊အသားအများဆုံးသတ္တ၀ါတွေဟာ ကျားဂူသွားရင်းထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပေမယ့် ကျားကိုတော့ မယုံသင်္ကာမဖြစ်ကြပါဘူး။တခြားအကြောင်းကြောင့်လို့ပဲထင်နေကြတယ်။ ကျားရဲ့ပုံစံကလဲမထင်ရက်စရာ၊မျက်နှာလေးက အမြဲချိုပြီး စကားသံလေးက ခပ်အေးအေး၊အမြဲတမ်းအိနြေ္ဒအပြည့်။ဒါပေမယ့် ပျောက်သူများလာတော့ မနေသာကြတော့ဘူး။ပညာရှိယုန်ကိုပဲအကျိုးအကြောင်းပြောဆိုပြီး စုံစမ်းခိုင်းကြတယ်။အကူအညီတောင်းကြတယ်။ယုန်လည်းစုံစမ်းဖို့ ကျားဆီထွက်လာခဲ့တယ်။ကျားဟာယုန်လာတာကိုမြင်တာနဲ့ ပျာပျာသလဲကြိုဆိုတယ်။လိုလေသေးမရှိဧည့်ခံတယ်။ယုန်လည်းလာရင်းကိစ္စမေ့သွားတယ်။ အနံ့တစ်ခု ရတော့မှ သတိပြန်ရတယ်။သေချာတယ်….ကျားရဲ့ပါးစပ်က နံတာ။ပညာရှိယုန်ပဲ သိပြီပေါ့။ ကျားကလဲသိပ်လျင်တော့ ယုန်အခြေအနေကို သဘောပေါက်သွားတယ်။ကျားပဲ…ဘယ်၇မလဲ “ငါ့အကြောင်းကို မင်းသိပြီမဟုတ်လား၊သူများတွေကိုမင်းလျှောက်မပြောနဲ့ပြောရင်မင်းကိုငါသတ်စားမယ်၊ မပြောရင်လူအများရှေ့မှာ မင်းကို ဆရာခေါ်မယ်”လို့ ညှိတယ်။ ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အသက်တော့ ကိုယ်မြတ်နိုးတာပဲမဟုတ်လား၊ပြေလည်သွားတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေသာကြာသွားတယ်ဒီကိစ္စစုံစမ်းမရတော့ဘူး၊ကျားဂူမှာ စည်ကားဆဲ၊ကျားကလဲသက်သတ်လွတ်စား ဥပုသ်စောင့်မြဲ၊တိရိ စ္ဆာန်တွေကလည်း ပျောက်မြဲပေါ့လေ.. ဒါပေမယ့် ယုန်ကတော့ ကျားရဲ့ဆရာ ဖြစ်သွား ပြီ လေ……. (သော်ဇင်အုန်း) ဟန်သစ် မဂ္ဂဇင်း ဇူလိုင်လ ၁၉၉၂
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:58 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:08 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:05 AM0comments
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့အရာထဲ ဘ၀ကိုအတင်းထိုးသိပ်ထည့်ရင်း လေညှင်းလေးတောင်မှ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှုခွင့်မရခဲ့ပါ
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 3:15 AM0comments
လူဆိုတာ မွေးကတည်းကေ၇ချိုး ပေးရတဲ့ သတ္တ၀ါ
လူဆိုတာ မွေးကတည်းက ရေချိုးပေးရတဲ့ သတ္တ၀ါ
အမေ က မီးလုံးတွေသာ မြင်နေရတယ် လှည်းပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး လိုက်သွားနေရတာ
ခွဲစိတ်ခန်းထဲကို သားအဖေလိုက်လို့မရဘူး တံခါးကြီး ဂျိမ်း က နဲ ပိတ်လိုက်တော့
အမေ့ ရင်ထဲ ထိတ်သွားတာ အားငယ်သလိုလို ကြောက်သလိုလို မီးလုံးတွေက အမေ့မျက်နှာ
တည့်တည့်မှာ အဖြူရောင်တွေပဲမြင်နေရတာ စိတ်အေးအေးထား စိတ်အေးအေးထားနော်
ဘာမှမဖြစ်ဘူး စိတ်ကိုလျှော့ထား ဘာမှမပူနဲ့ စကားသံတွေကြားထဲမှာ အမေ့ ခါးဆစ်
စစ်ကနဲ ကျင် သွားတာ သိသလိုလို မသိသလိုလို အမေ့မျက်နှာရှေ့ အစိမ်းရောင်ပိတ်စကြီး
ကျလာတယ် စကားသံတွေတော့ကြားနေရတယ် ဗျိကနဲ ဇွပ်ကနဲ ဓါးနဲ့ခွဲနေသလိုလို
တကယ်လိုလို အိပ်မက်လိုလို အမေ အသံတွေကြားနေ၇တယ် အသံတွေကြားနေရတယ်
ရပြီ ပုတ်လိုက် ပုတ်လိုက်
အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ အုဝဲ
ကလေးက အသံအောင်လိုက်တာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအပြင်ထုတ်လိုက်တော့
မြန်မြန်လုပ် သွက်သွက်လေး ကလေးအဖေကိုသွားပြလိုက်တော့ ငါတို့ပြန်ချုပ်ရအုန်းမှာ
ဒီနေ့ မွေးတဲ့ ကလေးဟာ အဓီပတိဖွားနော်
၂၆.၈.၂၀၁၂ ၁၂း၃၀ pm
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 2:39 AM0comments
အမှန်တရားဆိုတာ ထားလိုက်ပါ များရင်နိုင်နေတဲ့ ဒီအခါမှာ
ွှအမှန်တရားဆိုတာ ထားလိုက်ပါ များရင်နိုင်နေတဲ့ ဒီအခါမှာ
by သော် ဇင် အုန်း on Saturday, August 25, 2012 at 11:35pm ·
အသက်ဖြစ်ဖြစ် ကဗျာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုတော့ပြန်ငယ်ချင်လိုက်တာ
နှစ်ခုလုံးမရနိုင်ဘူး တစ်ခုမှလဲ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ရူးလို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာ သိလျှက်လိုချင်မိတာပါ
ဒီလိုလေးဗျာ ဒီလိုပါ ဒီလိုစီစဉ်ရတာ
ဘေးတိုက် ကန့်လန့် ဘေးထိုင် ဘုပြော
ကျနော်သည် မြန်နိုင်ငံသားစစ်စစ် နိုင်ငံသား မိဘ ဘိုးဘွား
ယခုအချိန်ထိ လက်မှတ်တွေ ရေးထိုးနေရသည်မှာ
အဘေး အဘီ အဘင်တွေ ကို သက်သေပြုတော့လဲ
ကိုယ်အဆိုတင်သွင်းလိုက်တဲ့ အခါ ထောက်ခံသူ
ရာခိုင်နှုန်းက ကိုယ့်ဘက်မှာ များနေမှ
ဒီလို နေနေ ရ ပါကြောင်း
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 2:37 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:40 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 12:44 AM0comments
ကဗျာ့အရေးကို မကာကွယ်လျှင် ကဗျာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်
ကဗျာတွေရဲ့ သေဆုံး ပျက်စီးမှုနှုန်းဟာမြင့်တက်လာ
ကဗျာကိစ္စကို ကမ္ဘာက ပြောင်းပြန် အမှားတွေကြားသိနေကြ ကမ္ဘာကသေသေချာချာ
မသိပဲ ရမ်းသမ်း အပြစ်တင်နေကြ
ကဗျာကိုသိလျက် ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် ကဗျာပြင်ပ ကဗျာတွေက ကဗျာကိုငြင်းပယ်နေကြ
ကဗျာဘက်မှသမတကြီးက ရဲဝန့်ပြတ်သားစွာ ရပ်တည်လိုက်တဲ့အခါ
ကဗျာကိုသေသေချာချာအသိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူကြီးလဲရောက်လာ
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:26 AM 1 comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 9:56 PM 1 comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 9:50 PM 1 comments
ပထမတန်း ကျောင်းသားလေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
လေးတန်း သုံးတန်း အပြင်မှာထွက်စီ
နှစ်တန်း တစ်တန်း သူငယ်တန်း
ကျောင်းသားအရေးသုံးပါးကို ဆို၊တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ဆို
အားလုံးမတ်တပ်ရပ် ဆရာမကိုနှုတ်ဆက် မင်္ဂလာပါဆရာမ
ပဉ္စဂုဏံ အဟံဝန္တာမိ အာစရိယဂုဏံ အဟံဝန္တာမိ
ဆယ့်နှစ်နာရီ ထမင်းစားချိန် ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲ စာပြန်သင်
တစ်ခါတလေ စာရိတ္တ ၊တစ်ခါတစ်လေ ဘ၀တွက်တာ
ဆရာမက အိမ်စာတွေအမှတ်ချစ်တယ် အိမ်စာတွေပေးတယ်
အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့သင်္ချာ အိမ်စာပေးတယ်
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:08 PM0comments
အားအားယားယားရှိ မိုင်းထောင်တယ် ဗုံးခွဲမယ်
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 2:14 AM0comments
ဟဲလို မစ္စတာတောက်တဲ့ ခင်ဗျားအဆင်ပြေရဲ့လား
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 1:59 AM 1 comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 1:50 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 1:50 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 12:05 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 11:47 PM0comments
ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်စရာမလို သူ့နဂိုမူရင်းကိုက အားလုံးပြီးပြည့်စုံပြီးသား (စစ်)
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:26 PM0comments
၂၀၀၈ မေ ၂....၃
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:00 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:49 PM0comments
အသက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်/ထုပ် ထားတော့ပြေးလွှားရလွယ်ကူတာပေါ့လေ
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 3:28 PM0comments
ဖြစ်သမျှ အမျှပါ /သာဓု သာဓု သာဓု
တစ်ယောက်က မုန့်ဟင်းခါး ဆို မုန့်ဟင်း ၀ိုင်းခါးလိုက်ကြ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ဗွီနိုင်းတွေ ဒီဗီဒီ စီဒီတွေ မှတ်တမ်းတွေ လက်ဖက်ရည်ဖိုးသာသာ တဲ့ လိုင်းကားပေါ်မှာ ရောင်း နေ တာ တစ်ယောက်က အသုတ်စုံ ဆို အသုတ်ဝိုင်းစုံလိုက် ကြ စာအုပ်တွေတကိုင်ကိုင် တီရှပ်တွေဝတ်လို့ ပြက္ခဒိန်တွေလဲ ပါ ပွဲတွေမှာ ပြုံး ပျော် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် မိန့်ခွန်းစကား ပါးစပ်လှုပ် ၀ုန်းးးးးးးးးးး ကနဲ လက်ခုပ်သံ အားပေးမှုတွေနဲ့ တစ်ယောက်က ဇီးသီးဆို ဇီးကို ၀ိုင်းသီးလိုက် ကြ တစ်ယောက်က ပန်းသီးဆို ပန်းကိုဝိုင်းသီးလိုက် ကြ သာရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး နာရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး လူမှုရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး အကျိုးဆောင်များးးးးးးး ဘွဲ့တံဆိပ်များးးးးး ချီြးှမှင့်ခံရ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ရေ မြေ လေ မင်း မီး ဘေးးးးးးများသို့ အလှုငွေများပေးအပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဖျပ် ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာလွယ်လိုက်တာ ဟိုးးးးးးးးးရှေးးးးးးးးရှေးးးးးးရှေးးးးးးတုန်းက ဒေါက်ထောက်ထားရတဲ့ ကင်မရာ ၀တ်ရုံထဲခေါင်းဝင်လို့ရိုက်ရတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာ အဖြူ အမဲ ဖလင်ကူးးးး ဆေးးးး အမှောင်ခန်းများးး လွမ်းစရာ ရှေးးးးရှေးးးးရှေးးးးးတုန်းက အတတ်ပညာရှင်သာကိုင်ခွင့်ရတဲ့ ကင်မရာ ခုများးးးးး လွယ်လိုက်တာ ခု ဖြစ် ခု သိ ခုဖြစ် ခုမြင် သင်လည်းးးး သတင်းကြည့်သူ သင်လည်းးးသတင်းထုတ်လွှင့်သူ သင်လည်းးးးးးး မီ ဒီ ယာ ကမ္ဘာကြီးကို ဖြန့် ဝေ သူ သင်လည်းးးး မှတ်တမ်းတင်သူ/သမိုင်းကိုရေးသူ တစ်ယောက်က မြေကွက်ဆို မြေကို ၀ိုင်းးးး ကွက်လိုက် ကြ စလစ် ပါမစ် ဂရမ်.... 20'x60' 40'x60' 60'x60' 60'x80' 80'x80' 80'x100' 100'x100' လမ်းမ ကျောကပ် ဒေါင့်ကွက် အတွင်း လမ်းဦးတိုက်... ပစ်ထားလိုက် အစာမကျွေးရဘူး သူ့ဘာသာသူတန်ဘိုးတက်လာ မှာ ၀ယ်ထားးး ရတုန်းယူထားးး မစဉ်းစားးးနဲ့ ပေကပ်ကပ်လုပ်မနေနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ တွေဝေမှုဆိုတာ လန်းးးသွားးးတဲ့အခါ နောင်တမရနဲ့ အကျိုးဆောင်တွေ အကြောင်ဆိုးတွေ ဘာမှမသိပဲ ငွေရင်းရင် ငွေရမှာဆို တဲ့ ငွေနဲ့ငွေကိုကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြတာတွေ လမ်းမနဲ့နီးတယ် ဘူတာရုံနားမှာ ဆိုရင် နောင်ဆယ်နှစ်ကြာရင် ဦးစားပေးအဆင့် စသည်ဖြင့်..................................... တန်းစီကြနော် တန်းစီတဲ့ဇယားအတိုင်း ပေးမှာ အ၀ိုင်းပါတ်ယာဉ်ကိုဦးစားပေးပါ ကြားကိုဖြတ်ပြီးရွေးတဲ့အခါ ရွေးတဲ့ကြား ကို ခင် ဗျားးးးးး ဘယ်လိုေ၇ာက် လာ သ လဲ...... (သော်ဇင်အုန်း)
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 2:57 AM 1 comments
2012 Poetry Ebook
၂၀၁၂ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့တွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သော ၂၀၁၂ ကဗျာစာအုပ်အား
E-Book အဖြစ်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ။
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 3:30 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:57 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 12:42 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:19 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:56 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 1:28 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 11:29 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 11:21 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 11:15 PM0comments
ကဗျာကိုဖတ်ပြီး ပြောတဲ့စကားကို ကဗျာစကားနဲ့ ပြန်ကြားလိုက်သည်
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 11:04 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:54 PM0comments
လှိုင်းတွေဟာ တ၀ုန်းဝုန်း ဘယ်လိုပဲ အားကောင်းစွာ ချီတက်လာကြပေမယ့် ကမ်းခြေမှာသေဆုံးကြရတာ
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:27 PM0comments
ကျနော့်ချစ်ဇနီး နဲ့ သားလေး
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 1:08 AM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 12:51 AM0comments
ဖွင့်စရာ မလိုတဲ့ တံခါးများ
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 12:42 AM 1 comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 12:20 AM0comments
အစကို အမှတ်ရခြင်း အတွက်နေ့ တစ်နေ့
ထူးထူး ဆန်းဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး
တစ်နှစ်တစ်ခါ ရောက်ရောက်လာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပေါ့
မိုးပေါ်ကျလာတဲ့ နေ့တစ်နေ့တော့ မဟုတ်ဘူး
ပြက္ခဒိန် စာမျက်နှာပေါ်က ထွက်ပေါ်လာတာလဲ မဟုတ်ဘူး
ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ရောက်လာ လူဆိုး/လူကောင်း လား မသိ
၀တ်လစ်စလစ် ခန္ဒာကိုယ်လေး အောင်စီဂျင် စရှုတဲ့နေ့
တချို့က ခွဲစိတ်ခန်းထဲက လာခဲ့တယ်
တချို့က သားဖွားဆရာမ လက်ထဲက လာခဲ့တယ်
တချို့က အရပ်လက်သည်မ လက်ထဲက လာခဲ့တယ်
တချို့က မိခင်ကိုယ်တိုင် မွေးဖွားခဲ့တယ်
၂၀၀၈ နာဂစ်တုန်းက ဖခင်က ချက်ကြိုးကို ပါးစပ်နဲ့
ကိုက်ဖြတ်ပြီး လူ့လောကထဲကို ပို့ပေးခဲ့တယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သောက်ဆေး ထိုးဆေး တားဆေး တွေကြားက
ရုန်းထွက် လာနိုင်ခဲ့တာကိုပဲ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားလို့.....................
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 8:39 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:46 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:38 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:30 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:21 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:17 PM0comments
Posted by သော်ဇင်အုန်း at 10:12 PM0comments
အခြေခံ ကဗျာ မူလတန်းကျောင်း ဒီဇင်ဘာလ တတ်မြေ...
ကျမ မွေးနေ့လို့ဆို ပြီး သူ….လေ…….. စကော့တလန်တံဆိပ...
အမှန်တရားဆိုတာ ထားလိုက်ပါ များရင်နိုင်နေတဲ့ ဒီအခါ...
ကဗျာ့အရေးကို မကာကွယ်လျှင် ကဗျာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သ...
ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်စရာမလို သူ့နဂိုမူရင်းကိုက အားလုံး...
အသက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်/ထုပ် ထားတော့ပြေးလွှားရ...
ကဗျာကိုဖတ်ပြီး ပြောတဲ့စကားကို ကဗျာစကားနဲ့ ပြန်ကြား...
လှိုင်းတွေဟာ တ၀ုန်းဝုန်း ဘယ်လိုပဲ အားကောင်းစွာ ချီတ...